Archive du 20161102
Baomba teny amin�ny A&C Ivato Sinema indray ?
Nihorohoro ny mponina teny Ivato omaly, tokony ho tamin�ny fito ora sy sasany hariva nandre feon-javatra nipoaka mafy sady nankarenin-tsofina.
Depiote Harinosy Rabenerika Charlot Mbola mitazona ny loko loranjy aho
Mandeha ny resaka any ho any milaza fa efa tena misalotra manao karavato mangan�ny antokon�ny fitondrana misy ankehitriny ny tenako, hoy ny depiote Harinosy Rabenerika
Masimana Manantsoa Tsy mifampatoky ny mpitondra
Manoloana ny filankevitry ny minisitra nidinan�ireo mpikamban�ny governemanta tany Antsiranana ny faran�ny herinandro teo dia naneho ny heviny ny mpanao politika Masimana Manantsoa.
Didier Ratsiraka Ho avy ao Fianarantsoa, 15 taona aty aoriana
Taorian'Antsiranana dia Fianarantsoa indray no mandray ny fankalazana mitety faritra ny fahefapolo taona niorenan'ny antoko AREMA
Fifanarahan�ny �31 oktobra 1991� Nahomby fa nosomparan�ny Frantsay
Mitovy amin�ny zava-niainana tamin�ny taona 1991 ny tranga misy eto Madagasikara ankehitriny, hoy ny profesora Ralison Roger.
Frank�f�nia Hialoha lalana ny fihaonamben�ny Fiarahamonim-pirenena
Hisokatra anio ary haharitra telo andro ny fihaonambe faha-10 an�ny fikambanana tsy miankina (ONG) sy ny Fiarahamonim-pirenena amin�ny tany miteny frantsay,
Fa ahoana ihany ry Jean ity tan�na may mandritra ny fivoriana sy filibanareo any amin�ny faritany ity a ?
Antananarivo Renivohitra Miroso hatrany ny fanadiovana ny tan�na
Tsy mikely soroka amin�ny politika fanadiovana ny tan�nan�ity renivohitr�i Madagasikara ity ry zareo eo anivon�ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Vono olona tany Mananjary Tany tsy misy fanjakana intsony ?
Niteraka resabe ny fandoran�ny olona velona ilay ramatoa iray antsoina hoe Ratsaramandimby Lucette, voalaza fa iraka avy amin�ny fiangonana zandriny iray eny Ampasika, Antananarivo ka nanota fady tao amin�ny doany Valamena Satrokefa tamin�ny alalan�ny fanipazana henan-kisoa ny alahady 30 oktobra 2016 teo.
Tsy masi-mandidy intsony ny mpitondra Mirongatra ny Fitsaram-bahoaka
Tsy mitsitsy intsony ny olona fa avy hatrany dia manao izay saim-pantany manoloana ny fandikana ny lal�n�ny fiarahamonina.
Tranombokim-pirenena Anosy Varotra voninkazo maro samihafa
Toy ny fanaony isan-taona dia manatanteraka varotra fampirantiana voninkazo etsy amin�ny tranombokim-pirenena Anosy ny fikambanana Ceinture Verte.
Lalana Tsarasaotra-Ivato Tsy mbola voaloa ny volan�ireo rava trano
In�enina nihemotra ny fotoana tokony handoavan�ny fanjakana ny vola omena ireo mponina rava fananana eny Tsarasaotra mihazo an�Ivato nanamboarana ilay lalam-baovao handraisana ny frankofonia.
Trano fonenana eny Ankatso Nifandona indray ny zanak�Atsimo Atsinanana sy ny zanak�i Sofia
Vaky indray ny ady teo amin�ireo mpianatra zanaky ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny zanak�i Sofia, samy manovo fahalalana eny amin�ny anjerimanontolo.
Masoandro no solon�anarana iantsoan�ireo mpitrandraka vato ao Anjozorobe ny filoham-pirenena ankehitriny.